G-TALK ချက်ဘောက် ဘက်ဂရောင်းပြုလုပ်ခြင်း
မိမိ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပြူတာ နဲ့ ချက်တင်သမား တွေ အတွက် မိမိ ဂျီတော့ ချက်ဘောက် လေးကို
အပုံလေး ထည့် ပြီး အသုံးပြုနည်းလေး ပြောချင်ပါတယ်..သိပြီးသူများရှိမယ် ထင်ပါတယ်
မသိသေးမရှိသေးတဲ့ လူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်..ညီလုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းလေး ကို အရင်ကြည့် လိုက်ပါဦး
မိမိ ဥာဏ်ရှိသလို ဖိုတိုရှော့ သုံးပြီး ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်..
နမူနာ ပုံလေး က
အိုကေ ကြိုက်ရင် စလိုက်ရအောင်..
အဆင့်၁။။။ RUN ကို ခေါ်လိုက် run ကို start ကနေပြီး နှိပ်လိုက်ရတယ် နောက်ခေါ်နည်းက window key နဲ့r ကို တွဲနှိပ်ရင် run ဘောက် ပေါ်လာမယ်..
အဆင့်၂။။ Local Settings\_Application Data\_Google\_Google Talk\_themes\_system\_chat\_ClassicPicture\_Contents\_Resources
အထက်ပါစာသားကို တစ်လုံးမကျန်အောင် ထည့်ပြီးရင် အိုကေ နှိပ်လိုက်..ဒီလိုပုံလေး ပေါ်လာမယ် xp ၀င်းဒိုးမှာနော် w7လဲရတယ် ..
ပြီးရင် မိမိ ကြိုက်ရာ ဓါတ်ပုံ တစ်ခု ကို အခုမြင်ရတဲ့ဖိုင် ထဲ ထည့် လိုက်
မူရင်း ဖိုင် မှာ ငါးဖိုင်ပဲ ရှိမယ် ဓါတ်ပုံ ထပ်ထည့် ရင် အားလုံးပေါင်း
ခြောက် ဖိုင် ဖြစ်သွားမယ် ဓါတ်ပုံ ကို မှတ်မိလွယ်တဲ့နာမည် တစ်ခုပေးထားဗျာ..
အဆင့်၃။။ အဲဒီ ဖိုင်တွေ ထဲက main ဖိုင် ကို ရိုက်ကလစ် open with notepad နဲ့ ဖွင့် လိုက်ပါ..
margin: 6px;နောက်မှာ ဒီစာသားလေး ကို ထည့် လိုက်
N2 နေရာမှာ မိမိ ဓါတ်ပုံ နာမည်လေးကို အစားထိုး ပေးလိုက်ပါ..
ဓါတ်ပုံ က jpg အမျိုးစား မှ ရ မယ်နော် သတိပေးတာ..
ပြီးရင် notepad ဖိုင် က နေ save နှိပ်လိုက် ပြီးရင် ချက်ဘောက် ကို
ဖွင့် ကြည့် လိုက်ပါ..
မိမိ ထည့် ထားသော အပုံလေး ကို ချက်ဘောက် မှာ မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါသည်..လေးစားစွာဖြင့်(ဇာနည်)
Posted အဲဒီအချိန်က Monday, February 18, 2013
ကွန်ပြူတာဖွင့် စဉ် နှေးနေတာ ကိုမြန်အောင်လုပ်နည်း ...
ကွန်ပျူတာ လိမ်ရောင်းနည်း ခေါင်းစဉ်မြင်လိုက်တော့ ...
Memory ကတ်ထဲမှာ အရေးကြီး Data ကို တစ်ယောက်ထဲအတွက်သ...
ကွန်ပျုတာ မအိပ်အောင်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ ...
Laptop computer သုံးစွဲသူများ သတိပြုရန်အချက်များ
ဘ၀အရေး စိတ်အေးရလေအောင် အာဠာဝကဘီလူးကမေးပြ...
အွန်လိုင်းမှာ ၂၄ ဘာသာကို မြန်မာလို ပြန်ပြီးကြည့်ြ...
win 64 Zawgyi
- ဘာသာရေး သံသရာခရီးသည် ရွှေပါရမီ ပညာဒါန ၀ီရဓမ္မ မင်္ဂလာသတင်းစဉ် သီတဂူဓမ္မဝိဟာရ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး မိုးကုတ်ဝိပဿနာ မင်းကွန်းဆရာတော် သဲအင်းဂူဆရာတော် သီတဂူဆရာတော် မဟာစည်-၁ အေးရိပ်ချောင်မဟာစည်ရိပ်သာ ချမ်းမြေ့ဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ-ပိုင်းလော့ ဖြူးဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဓ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆန္ဒာဓိက မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ အရှင်ဇဝန-၁ အရှင်ဇဝန-၂ ဆရာတော်ဦးဝိဇယ ဓမ္မဒေါင်းလုပ် ဓမ္မရံသီ ဓမ္မဒါန ဓမ္မပေါင်းချုပ် E-Dhamma Burmese Classic တရားများ နိဗ္ဗာန်န တရားတော်များ-၁ တရားတော်များ-၂ ဓမ္မအေးရိပ် သီရိမင်္ဂလာ ဘ၀နေ့သစ်များ သီတဂူဦးဇင်းလေး ဆရာတော်ဦးလောကနာထ-၁ ဆရာတော်ဦးလောကနာထ-၂ ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု ဓမ္မသုခ ဓမ္မရနံ့ သန့်-တည်-ပွား ဆရာဦးမြင့်လွင် အဖြူရောင်မေတ္တာ-၁ အဖြူရောင်မေတ္တာ-၂ ဓမ္မမေတ္တာ ဝိမုတ္တိသုခ ဝိမုတ္တိရသ မေတ္တာပေတော ဓမ္မလင်းရောင်ခြည် ကိုထွန်းထွန်းလှိုင် အောင်မြေ သီတဂူဓမ္မဝိဟာရ ဓမ္မရေစင် ဓမ္မရသ ကောက်တေး-သိင်္ခ ပါရမီ အလင်းစေတမာန် ရွက်ဝါ အေးငြိမ်းပျော်ရွင် သစ္စာအလင်း အလင်းများရှိရာသို့ A light of Dhamma အလင်းရောင် ဘားမားမောင် အလှတရား ကိုမင်းဝေ သုခရိပ် ရွှေကြာ တရားတော် ဝိုင်အမ်ဘီအေအလှူဒါန ဓမ္မရိပ် သစ္စာတရား မြတ်ဗုဒ္ဓ ထေရဝါဒသာသနာ မနက်ဖြန် ဥပသကာ အရှင်ကုမာရ ဓမ္မပဒ ဘုန်းဘုန်းဦးဝိစိတ္တ မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများ ဓမ္မဟေဝန် ရည်ရွယ်ရာ အပြစ်ကင်းသောနေရာ အနတ္တလက္ခဏ ဦးကောဝိဒ ဆရာလေးဒီပင်္ကရာ လောကချမ်းသာ ဓမ္မဆုံချက် တောင်ပေါ်သား အရှင်ကုသလသာမ စကြာဝဠာ ဘာဝနာဗလဖိုရမ် ဒဿနခရီးစဉ် ကိုငယ်
Flash သီချင်းများနားဆင်ရန် သီချင်း(စာမျ က်နာ-၁) သီချင်း(စာမျ က်နာ-၂) သီချင်း(စာမျ က်နာ-၃) သီချင်း(စာမျ က်နာ-၄) သီချင်း(စာမျ က်နာ-၅)
ဂျာနယ်များဖတ်ရူလေ့လာရန် အင်တာနက်ဂျာနယ် 7daynews ဂျာနယ် weeklyeleven ဂျာနယ် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် ဈေးကွက်ဂျာနယ် အလင်းတန်းဂျာနယ် MyanmarTimeဂျာနယ် အခွင့်အလမ်းဂျာနယ် ဧရာဝတီဂျာနယ် ရွှေအမြူတေဂျာနယ် မြန်မာဘောလုံး Eleven ဂျာနယ် Flower News ဂျာနယ်
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဒ်များသို့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဓမ္မရသ မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုခြင်း ဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုခြင်း ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်း သူတော်ကောင်းတရားများ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ့ လောကအသင်းကြီး ဓမ္မလက်ဆောင် ဓမ္မအလင်းရောင် ဓမ္မရနံ ဓမ္မရိပ် ဓမ္မလင်းရောင်ခြည် ဓမ္မဌာနေ ဓမ္မဟေဝန် ဓမ္မစကား ဓမ္မမေတ္တာ ဓမ္မကုန်းမြေ ဓမ္မဥယျာဉ် ဓမ္မပန်းခင်း ဗုဒ္ဓစာကြည့်တိုက် ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးအသင်းချုပ် ဓမ္မပဒပါဠိတော် မဟာလယ်တီ ဒီပနီကျမ်းစာ ဓမ္မဒူတ လူငယ်များအသင်း ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) အရှင်ကုမာရ အရှင်ဝိစိတ္တ (Korea) မြတ်ရောင်နီ အရှင်လောကနာထ အရှင်နန္ဒသာရ(သစ္စာရောင်ခြည်) အရှင်ကောဝိဒ(မြိတ်) အရှင်ကောဝိဒ၏ပညာဒါန အရှင်ဦးဥတ္တမသာရ အရှင်ကုသလသာမိ (ပျော်ဘွယ်) အရှင်ဉာဏဒီပ (ဓမ္မရတနာ) အရှင်သာဓိန(အလင်းသစ်) အရှင်ခေမိန္ဒ (မော်ကွန်းသစ်) အရှင်ဝိစိတ္တသာရ(ဓမ္မဂင်္ဂါ ) အရှင်ဓမ္မသာမိ(အင်္လကာ) ရဝေနွယ်(အင်းမ) သာမဏေကျော်စာသင်တိုက် တရားတော် သုခကာမီ ဥပသကာ ဝိမုတ္တိရသ စန္ဒာသူရိယ မြတ်ပန်းရဂုံ (ဓမ္မသာကစ္ဆာသဘင်) သစ္စာတရားများစုဝေးရာ ယောအသင်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်း ဝါတွင်းအင်္ဂါပတ် ဆွမ်းလောင်း မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်း ထေရ၀ါဒ တို့တိုင်းပြည် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ပညာရံသီဝိဟာရ စိတ္တသုခဘုန်းကြီးကျောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီ ဗုဒ္ဓဓမ္မရံသီ(ဖန်လန်) ဓမ္မဝါဒီ အောင်မြေမင်္ဂလာ ဓမ္မရသ ဝိဟာရကျောင်း ဓမ္မရောင်ခြည် ကျောင်း ညောင်ကန်အေး( ဂျိုဟိုး) သီတဂူဓမ္မ၀ိဟာရေ ကျာင်း သီတဂူသတင်း သီတဂူစတား မိုးကုတ် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ် ပတ္တမြားရိပ်သာ (မိုးကုတ်) မဟာစည် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ် ညောင်ကန်အေး(မဟာစည်) ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ(မဟာစည်) အေးရိပ်ချောင်(မဟာစည်) သဲအင်းဂူ ဝိပဿနာ ကန္နီသမထဝိပဿနာ မြေဇင်း ဝိပဿနာ ကသစ်ဝိုင် ဝိပဿနာ ထေရဝါဒတက္ကသိုလ် ကလေးဝ တောရ လောကချမ်းသာ အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာ အဖြူရောင်မေတ္တာ သစ္စာအလင်း သုခရိပ် ချယ်ရီမြို့တော် နေခြည်သွေးသစ် သရုပ်ပြ အဘိဓာန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရွှေတိဂုံပါရမီဖြည့် မပြီးဆုံးသောနေ့ရက်များ တရား၌မွေ့လျော်ခြင်း ပျော်ဘွယ်ဆရာတော် ငြိမ်းချမ်းစွာ ရွက်ဝါ မနက်ဖြန် ရည်ရွယ်ရာ မင်္ဂလာသတင်းစဉ် အေးငြိမ်းပျော်ရွှင် စေတနာသုခ ဇီဝိတသံဃာ့ဆေးရုံကြီး ဇမ္ဗူသီရိ မြတ်ရတနာ ဓမ္မဒါန ဓမ္မရံသီစာမျက်နှာ ဓမ္မရသ နိဗ္ဗာန နိဗ္ဗာနဓမ္မ မိုးကုတ်(လန်ဒန်) မြန်မာ့ ရတနာ အရှင်လောကနာထ အောင်မြေ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အနတ္တလက္ခဏသုတ် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ BuddhaNet Dhamma Download Dhamma Web DhammaWebBooks DhammaDownload Dhamma English Buddha Net E-Dhamma Golden Words One Dollar Fund The Best Friend ပညာပါရမီ
စာကြည့်တိုက်များ မြန်မာအီးဘွခ် မြန်မာ ရခိုင်များ ရွှေစကား နေ့သစ်စာအုပ်စင် အဖြူရောင်မေတ္တာ အံဘုန်းမြတ်စာအုပ်စင် အိပ်မက်လှိုင်းစာအုပ်စင် ဝိညာဉ်သစ်စာအုပ်စင် ဗမာ့ကြယ်ကွန်ယက်စာအုပ်စင် ဓမ္မပဒ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်အင်္ဂလိပ် စာပေရိပ် စကားဝါမြေစာကြည့်တိုက် ချယ်ရီမြို့တော်စာအုပ်စင် Myanmar Ebook Archive Myanmar Ebook Golden Myanmar Dhamma Web Books Dhamma Download Myanmar Dhamma Download English Burmese Classic Buddha Net Book Hive
နည်းပညာဆိုဒ်များသို့ စေတန်ဂေါ့ သံလုံငယ် ညီလင်းဆက် ညီနေမင်း စံပီး မောင်ပညာ မောင်စေတနာ ကိုThinker ကိုရန်အောင် ကိုမင်းကျော် ကိုကျော်စွာငြိမ်း ကိုဇော်357 ကို‌ဇော်(ဒဂုံ) ကိုချစ်ဦး ကို ကျော်ကျော်ဦး စပ်မိစပ်ရာ စိုင်းနက္ခတ် ဖိုးသား တူလေး ပုဂံသားမောင်ဘကျော် ရွှေမြန်မာတို့နည်းပညာ မုန်တိုင်း ရာမညဖိုးလပြည့် အလင်းရောင် အညာသား ဟိုက်ဝေး အိုင်တီခရီးသည် အိုင်တီမန်း နည်းပညာမှတ်တမ်း မာ့ခ်၏ကိုယ်ပိုင်အတ္တများ မနောသား မနောဖြူလေး မိုးမြင့်ရှိန်း မိုးထက်မြင့် လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ် မြန်မာ့သတင်းနှင့်နည်းပညာ မလေးရှားရောက်မြန်မာ ဟင်းလင်းပြင် ကျနော့မှတ်စုစာအုပ် ကနက်သီရီသားလေး ညီညီ(လောကမီးအိမ်) ဧရာညီနောင် အီလက်ထရောနစ် ဘုရင့်နောင် ဝိုင်း Burma IT Share Co2'sNote STAMEDIA Ogre KP3 Family Kogee Lay WWM MMBloggerHelpdesk Myanmar Download MyanmarITMen My Softwares ThememagicMonGTC Troj4n Engineer4Myanmar
* ကျနော့် ဘလော့ ကို လာရောက်လည်ပါတ်ကြသော ညီကိုမောင်နှမ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ...မှားတာများ ရှိခဲ့လျှင် mail ကို လာရောက်ပြောကြားနိုင်ပါသည်...(kokokyaw1987@gmail.com) သို့ မဟုတ် (mr.lovechit@gmail.com)
Android ဖုန်း Setting ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီး လန်းရအောင်
ဒီပိုစ့်လေးမှာတော့ Setting ကိုမြန်မာလိုပြင်နည်းလေးပဲရေးလိုက်ပေမဲ့ သုံးတတ်ရင်သုံးတ...
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် Tag ထေရ၀ါဒသာသနာ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အစ-အဆုံး - ဦးဝိစိတ္တသာရဘိဝံသ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ( Download - 56.25 MB ) ပရိ...
Zawgyi Keyboard for Nokia (Symbian) Nokia Zawgyi Keyboard ပို့စ်အား နွယ်ရိုး Blog မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ S...
Android ဖုန်းတွင်မြန်မာစာ ထည့်ကြမယ်
မိမိတို့ Android ဖုန်း/tablet မှာ မြန်မာစာစနစ်ရဖို့အတွက် အဓိက လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်ကတော့သုံးချက်ရှိပါတယ်။ (၁)Android ဖ...
အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေ မှာ ... ယပင့် တွေ ကပ်နေတဲ့ ပြသနာကို အောက်က Font လေးနဲ့အဆင်ပြေအောင် ညှိလိုက်ရအောင် ..... အောက်ကစာလုံးအနီလေးကို နှ...
Copyright 2011 နည်းပညာ ပြန်လည်မျှဝေခြင်း Template Designed by Rama Saputra Zylgwyne